HomeWararka Ciyaaraha MaantaPaul Pogba oo ka warbixiyay xaalada qandaraaskiisa ee Manchester United
June 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa sheegay inuusan weli helin wax soo jeedin la taaban karo oo ka imaaneysa Red Devils oo ku aadan heshiis cusub oo uu kooxda u saxiixo.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska qandaraaska uu kula joogo Old Trafford ayaa dhacaya bisha Juun ee soo socota, waxaana jira warar sheegaya mustaqbalkiisa kooxda 20ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in Man United ay haatan wadahadal la gashay ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka iyadoo rajeyneysa inay heshiis cusub oo waqti dheer ah la gaaraan.
Si kastaba ha noqotee, Pogba ayaa beeniyay inay jiraan wadahadalo adag oo dhexmaray labada dhinac, 28 jirkaan ayaa haatan si buuxda diirada u saaray inuu matalo xulkiisa Euro 2020.
“Hal sano ayaa iiga hartay qandaraaskeyga, qof walba waa ogyahay taas,” Pogba ayaa u sheegay RMC Sport . “Ma jiraan wax soo jeedin la taaban karo oo ku saabsan kordhinta, weli waxaan joogaa Manchester. Xilli ciyaareedka ka dib fasax ayaa jiray, marka ma aanan la fariisan maamulayaasha iyo tababaraha.
Real Madrid , Juventus , Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayaa dhamaantood la sheegayaa inay il gaar ah ku hayaan horumarada ku xeeran khadka dhexe.